skpari: बिगतका घटनाबाट
कोहि साहित्यकारको भनाई यस्तो छ,त्यसोत संसारै मायामा अडेको छ। मायाको डोरीमा नै हामी एक आपसमा बाँडिएको छ। हामीले नै हामीलाई अदृश्य रुपमा बाँच्ने प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। प्रेम वा बिश्वास हार्दिक्ता निकटता आत्मीयतामा जीवन नै सुबासित हुन्छ। आपसी आत्मा र भावनाहरु एक भै सातासात हुन्छ। तर प्रेममा शंका आशंका र अबिश्वास अथबा अज्ञान्ताले बास पाऊँछ, तब त्यसले बिछोड (Tragedy) निम्त्याउछ। आत्मा र भावनहरु बिक्षिप्त हुन पुग्छ। कोमल मुटुमा चोट लाग्छ।
बिक्षिप्त र मर्माहत भावनाहरु ह्रृदयमा अड्न नसकी उकुस मुकुस बनी संबेदशील शब्दहरुको रुपमा बाहिर आई पुग्छ। यस्तै स्थितिमा मान्छेले कबिता या कथालेख्न प्रेरित बनाऊछ अनि आफ्नो बिगतका घटनाहरुले कथाका रुपमा जन्म लिनपुग्छ यस्तै बिगतका घटना बाट प्रेरित भै केहि पानाहरु कथा र कबिताका रुपमा प्रसुत गर्दै छु।
अनि बिरानो छ,
अब आफ्नो कहाँ छ
अझै रहर छ
बाहाना काहाँ छ
गंन्तब्य पाऊँन मन लाग्छ
अंन्ध्यारो नै थियो जिन्दगि मेरो
उज्यालो पाउन मन लाग्छ
बाटो हराइरहेको छु
बिराइरहेको छु म कहिं
आवाज कसैको पाए
रोकिने छु त्यहिं
प्रबेश गर्ने छु अदृश्य किरण बनि
ह्रृदय् जहाँ छ उहिं
तस्बीर नै बनि
आउ तिमी नजिक मेरो
कुनै चित्र बनेर
उभि दिने छु त्यहिं
त्यो मिलनका पहिलो दिन (बिर्सन नसकेको क्षण)
तिमीलाई नभेटेको पनि
आज युग बिटे जस्तो,
जति हाँस्ने कोशिस गर्छु
त्यति पिडाले छट्पटी
मनमा खडेरी त पर्ने नै भए
‘साथ’ तिमि न भए पछि।
संगै हुंदा कति रमाई
हाँसि खुसी आफ्नै दुनियामा
तर आज, मात्र तिम्रो
याद बाँकी छ,
अरु सबै कल्पना मै
कति खुसि हुन्थे त्यो दिन हामी घण्टौ सम्म सुख दुख:का कुराहरु गर्दै हाँसखेलमै समय बिताऊन्थे। घाँम पानी पनि नभन्दै मोटर बाईकमै टाढा टाढा सम्म घुम्दै पुग्थे। कहिले सारा दिन माया प्रितीका कुरा गर्दै आफ्नै कोठामै बसी समय बिटाउथे।
बिटेका कुराहरु सम्झिन्दा केहि बेर मन त हल्का त हुन्छ, तर त्यस यादले छोडे पछि मुटुमा पिडा झन बढ्डो रहेछ।
आज पनि मलाई याद छ, त्यो हाम्रो मिलनका पहिलो दिन……..
तिम्रै गाऊँको एउटा मन्दिरको आंगनमा, एकजना साथिको साथमा मलाई भेटने भनी एउटा ठुलो चौरमा मेरो पर्खाईमा (सायद त्यस गाऊँको फुटवल ग्राऊड होला) एउटा बायाँ हातले छाता समाऊँदै अर्को दायाँ हातले कानको मोबाईल समाई फोन गर्दै यता उता हेर्दै थियो।
मोबाईलमा घण्टी बजेको सुनी मैले मेरो बाईक त्यही रोकी पैन्टको पकेटबाट मोबाईल झिकी हेलमेटको भित्र दायाँ कानमा राख्दै भने,
हेलो, कहाँ हो तिमी…? (मैले मोबाइलमा तिम्रो आवाज सुन्दै चारै तरफ नजर घुमाऊँदै यता उता हेर्दै भने)
हामी दुबैजना तपाईकै सामुने केही दुरिमै छु,
तपाई हामी दुई मध्य कुन चाहि म हो आफै पता लगाऊ ल….! (उताबाट तिम्रो आवाजमा ठटापन र अलि खुशि पनि झल्किरहेको मैले महेशुस गरेका थिए) मैले आफ्नै अगाडिको चौरमा तिमिहरुलाई देखिसकेका थिए। तर दुबैले एउटै ड्रेस लाईरहेकीले मैले ठम्याउन भने सकेको थिएन।
तिमिले मलाई देखे पछि मन्दिरको माथि आउने ईसारा गर्दै दुबैजना मन्दीरको भर्याङ्ग चड्दै माथि तिर लाग्यो। केहि खुडकिलो चढिसके पछि मेरो टाऊकोमा भएको हेलमेट फुकाल्नु, अनुहार एकपलट हेर्छु भनी तिमी काराई रहरकी थियो, म पनि अलि ठटा पारा मै तिमिलाई चिनि सके अब म जान्छु भन्दै बाइकमै बसिरहे।
धेरै अनुरोध पछि मैले हेलमेट निकाली तिमीहरु तिर हेरे, तर टाढा भएर होला मेरो अनुहार राम्रो सीत देखेन भनि कराउदै पनि थियो।
त्यस दिन म तिमीलाई भेटन भनि नै तिम्रो गाऊमा आएका थिए, र तिमी पनि मलाई भेटन भनि घर बाट अलि छिटै निस्केको भनेकी थिए,
चारै तिर हरियाली अनि त्यसको वरिपरी घरहरु मिली एउता सानो बजार बनेको थियो, बजारको दक्षिण पट्टी बिचमा त्यो मन्दिर अलि सानो पहाड माथि बनेको रहेछ। सानो सानो रुख भएकाले होला माथि जाने सीढी बिचमा कहिं कहीं अलि सिढि पनि देखि रहेको थियो। तिमी सिढिको बिचमा बसि माथि आएर एक चोटी मलाई भेटेर जानकोलागि हात हलाऊँदै भन्दै थिईन।
हेलमेट टाउकोमै राखी म पनि भर्याङ्ग चढ्दै तिमिहरु भए ठाऊँमा तिर हिड्दै थियौं।
पहिलो भेट भएर होला मलाई पनि मनमा कता कता कौतुहल अनि अलि डर भैरहेको थियो। आज भन्दा पहिले कहिले देखेको पनि त छैन तिमिलाई र तिमिले पनि देखेकी छैनौं। फोनमा त हाम्रो घण्टौ कुरा हुन्छ, तै पनि पहिलो भेट भएर होला अलि मनमा डर लाग्दो रहेछ डर यस अर्थमा कि यदि तिमिले मलाई अस्विकार गरी दियो भने के गर्ने..? मैले त तिमिलाई पहिले नै भनि सके तिमि जस्तो अबस्था पनि स्वीकारय छ।
गर्मीले पुरा टाऊँको पानि पानि भैसकेको थियो तर टाउकोमा भएको हेलमेट भने फुकाल्न मनै भैरहेको थिएन, एउटा हातले पसिना पुछ्दै मन्दिरको भर्याङ्ग चढ्दै दायाँ बायाँका रुखहरुको हाँगा समाउदै कुरा गर्दै म माथि उक्लदै तिम्रो नजिक पुग्ने प्रयास गर्दै थियौं।
सान्चै त्यो दिन म धेरै खुसि थिए मलाई त्यस दिन कहिले नभएको अनुभूति भैरहेको थियो। बिहान सम्म मोबाईलमा मात्र कुरा गरिरहेकी तिमी अब साचैकै भेट हुने भो भनि मनमा अनेक उमग र खुसीहरु त हुने नै भयो। रुख माथिका चराहरु पनि हाम्रै गीत गाऊँदै जिस्क्याई रहे जस्तो। तिमि आऊने खबरले होला तिम्रो पाईला चुम्न मंन्दिरको आंगन पनि मंन्द मुश्कान भैरहेको जस्तो।
“हो, मलाई आज पनि त्यो दिन याद छ।
“तर आज समय र परिस्थितिले हामी दुबैलाई बिछोड र बियोगको जिन्दगी जिऊन बाध्य बनाई दियो।
त्यस्तो सुखत मिलनका क्षनहरु सम्झि मन त हो नि तड्पिहाल्दो रहेछ।
काहिलेकाहि तिम्रो यादमा,
अनि अझ ‘सामिप्यता’
एउटा कहिल्ये पनि बिर्सन नसक्ने क्षण बनाई दियो।
तिम्रो त्यो कोमल र निश्चल ह्रृदयले
त्यसको यौनिक आकाक्षालाई
समेट्न सकिरहेको हुन्दैन।
कति मानसिक शारिरीक
यातना सहेर बसिरहेकि होली।
तर कति बजबूर, अनि
बिबस छु म पनि
तिम्रोलागि केहि गर्न
मात्र तिम्रो पिडाको आनुभूति
महेशुस गर्ने सिबाय्।
सायद बिछोडको घाऊले
तिमिलाई पनि पिडा दियो होला,
हरेक क्षन मलाई नै सम्झि
‘कष्टप्रद’ मै जियो होला,
कहिले मलाई सम्झि
एकान्तमा रोयो पनि होला
मेरो मन पनि रुन्छ,
बिस्तारै मुटुको धडकन बढ्छ,
ओठ्को कंपनले होला
आँसुका थोपा टपटप् बगी,
डायरीको पाना भिझे पछि
बल थाहा भो यो त सबै
सपना मात्रै रहेछ।
at Sunday, September 06, 2009 Labels: डायरीको पानाबाट
कहानी मार्मिक अनि बियोगले भरिएकको छ र कबिता पनि त्यस्तै लाग्यो राम्रो लाग्यो दुबै लेखहरु।